LibreFox, oru ngo iji melite nzuzo na Firefox | Site na Linux
Dịka akụkụ nke ọrụ Librefox, agbalịrị imepụta ewu Firefox ezubere ịbawanye nzuzo na ịbawanye nchekwa.
Ihe oru ngo a Ebumnuche iji mezuo nzuzo na nchekwa Firefox na-enweghị ịmanye ọrụ ahụ. Librefox na-eji ihe karịrị 500 nzuzo / nche / arụmọrụ ntọala, ihe nkedo, Librefox-Addons (nhọrọ) na ngwugwu Firefox dị ọcha, akụkọ mkpesa na mgbakwunye Firefox na-anaghị asọpụrụ nzuzo).
1 Banyere Librefox
2 Ngwa mgbakwunye enyocha ma kwadoro site na ndị mmepe
3 LibreFox isi atụmatụ
4 Budata LibreFox
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na Librefox abụghị ndụdụ nke Firefox, kama ọ na - eji ihe nchọgharị a dịka ntọala, A na-ewu ya site na iji koodu nke nsụgharị oge niile, na-enye gị ohere idobe ihe nchọgharị gị na oge na-agaghị egbu oge.
Ihe oru ngo a tinyere Ghacks user.js na mmepe ndị ọzọ nke atọ iji mejuputa atụmatụ nchebe.
Ọrụ nke ndị edemede bụ ịmepụta ihe nchọgharị na-enye ihe nchebe kachasị mma site na igbe ahụ.
Librefox bụ ọrụ mmeghe emepe emere iji nye onye ọ bụla nnomi nke ihe nchọgharị Firefox nke na-abịa na nzuzo na nkwalite nchebe gụnyere
Librefox Ihe ejiri mara ya bụ ịgbanwee nhazi na ịkwụsị ọrụ ndị na-enweghị isi.
Mgbanwe ndị ahụ sie ike iji dochie mozilla.cfg, mpaghara-settings.js na policy.json faịlụ, na-ewepu faịlụ ndị nwere ike ịpịpụta na mmelite na mkpọka, yana faịlụ nhazi ndị emetụtara.
Ngwa mgbakwunye enyocha ma kwadoro site na ndị mmepe
Na mgbakwunye na ya enwere ndepụta nke plugins ndị ndị na-emepe emepe na-atụ aro ya bụ ndị meworo nyochaa koodu ọzọ, nke gunyere uBlock Origin, Ihe Nchọgharị Ihe Nchọgharị Nzuzo Firewall, Onye ọrụ Agent Platform Spoofer, Mwepu nke Onye Nke Mbụ, Kuki Master.
LibreFox isi atụmatụ
Na ihe nchọgharị a a na-ekpochapụ ihe mgbakwunye niile na-emetụta nzuzo onye ọrụ, yana imelite koodu nkwenye na akụrụngwa iji zipu ozi gbasara mkpọka.
LibreFox nwere firewall agbakwunye maka nkwụnye nke na-egbochi ịnweta netwọk.
A na-ehichapụ ntọala ahụ site na njikọ ndị e wuru na sava Mozilla na site na ọrụ oku na-arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ na ọrụ (dịka ọmụmaatụ, ịbugharị ndepụta Google blacklists).
Ndabere, Librefox anaghị ebute njikọ mpụga ọ bụla.
LibreFox Ọ nwere ihe karịrị 500 mgbanwe na mwube ihe nchọgharị sezubere iji melite nchebe, nzuzo na arụmọrụ.
Nchịkọta ghacks-user.js na pyllyukko user.js ka eji dika ndebiri iji gbanwee ntọala.
A na-echebe ntọala kachasị mkpa megide mgbanwe mberede, gụnyere mgbakwunye, site na ịkwaga ha na faịlụ mozilla.cfg na policy.json.
Ndị ọrụ Firefox chọrọ ịmata ọdịiche dị n'etiti Firefox na Librefox nwere ike ịchọ nyochaa faịlụ mozilla.cfg na Policies.json dị ka mmalite.
Edere ndepụta ahụ nke ọma, mana ọ nwere ike iwepụta oge iji aka nyochaa ya.
Biko rịba ama na ịkwesịrị idezi faịlụ ndị a kpọmkwem, ebe ụfọdụ ntọala ekpochiri ma enweghị ike ịgbanwe site na Librefox; edezi nwere ike achọrọ ma ọ bụrụ na ị nwere ndakọrịta mbipụta na họrọ weebụsaịtị.
Maka ntinye, a na-enye nhọrọ nhọrọ nke nkwụnye (Librefox-addons), nke gụnyere Librefox Dark Theme, Librefox HTTP Watcher (maka HTTP na-enweghị izo ya ezo, gbanwere agba mmanya adreesị) na bọtịnụ Librefox Load (na-ebugharị bọtịnụ peeji ahụ weghachite na ebe adreesị).
Owuwu maka Linux, Windows na macOS di nbudata, dabere na Firefox 64 (nhọrọ Librefox na-ewu dabere na Firefox 60.4 ESR na Tor Browser 8.0.4 dị).
Enwere ike ịchọta ntuziaka nwụnye na njikọ a, yana koodu isi.
Mmepe nke LibreFox dị ọhụụ, yabụ anyị ga-echere ntakịrị iji hụ ka ọrụ ọhụụ a si apụta, yana ojiji na nnabata ndị ọrụ.
Maka ugbu a, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ntọala magburu onwe ya, ebe ọ bụ na taa, ọtụtụ ndị ọrụ anaghịzi ajụ maka ihe nchọgharị ndị jupụtara n'ọtụtụ narị ọrụ ndị anaghị eji ọtụtụ akụkụ.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, ha na-achọ ihe nchọgharị kwụsiri ike nke na-asọpụrụ ma na-elekọta nzuzo nke onye ọrụ, mana na-eleghara arụmọrụ anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » LibreFox, oru ngo iji melite nzuzo na Firefox
Ezi post! Ikekọrịta!
Zaghachi ka iyo-akwarium-mpụga
Valve na-ebipụta ụdị beta ọhụrụ nke Proton 3.16.6
Tụgharịa gị Pi Pi n'ime ebe ohere ikuku